Sharciyada iyo xuquuqda - 1177 Vårdguiden
Regler och rättigheter - somaliska
Diyaarso booqashadaada dhakhtarka – toban talo
Förbered ditt läkarbesök – tio tips - somaliska
In aad is diyaariso waxa aad ka qayb qaadasho ku lahaanaysaa daryeelkaaga caafimaad oo waxad si wada-jir ah shaqaalaha caafimaadka ula habaynaysaa daryeelka caafimaad ee sida ugu fiican kuugu haboon. Aasaaska daryeel caafimaad oo ammaan iyo hubaal ah waa wada hadal shaqeeya oo fiican una dhaxeeya adiga iyo shaqaalaha caafimaadka.
Dooro rugta daryeelka caafimaadka
Välja vårdmottagning - somaliska
Adiga ayaa dooran kara rugta caafimaadka ama rugta daryeelka caafimaadka ee aad doonaysid inaad tagto marka aad u baahantahay daryeelka caafimaad ee furan. Waxa aad dooran kartaa inad raadsato daryeelka furan meel kasta oo ka mid ah Iswiidhan oo dhan.
Kharashka bukaan socodka ee Västra Götaland
Patientavgifter i Västra Götaland - somaliska
Patientlagen - somaliska
Sharciga bukaan-socodka waxa loo soo saaray adiga oo ah bukaan-socod. Kaas waxa ku sharaxan inaad hesho warbixin ku saabsan cudurkaaga iyo noocyada daaweyn ee jira. Markaasi xitaa adigu waad ka mid ahaanaysaa oo go’aaminaysaa wixi ku saabsan daryeelkaaga caafimaad. Waa inaad xitaa ogaato meesha aad ka dooran karto daryeelka caafimaad ee aad u baahantahay.
Sir haynta shaqada iyo qarsoodi
Tystnadsplikt och sekretess - somaliska
Marka la aado xannaanada waxaa muhiim ah in lagu kalsoonyahay shaqaalaha lalo kulmo. Kalsooniddu waxay muhiim u tahay si uu qofku u dareemo in uu aaminyahay iyo si uu u awoodo in uu uga hadlo si bannaan dhibka hayo ama ifafaalaha uu isku arkay oo markaasna uu u helo xannaanada uu u baahanyahay. Sidaas daraadeed bay dadka oo dhan oo ka shaqeeya xannaaneynta- iyo daryeelka bukaanka (hälso- och sjukvården) u qabaan sir haynta shaqada. Mabda'a aasaaska ah waa in uusan qof ka shaqeeya xannaada bukaanka uusan dhiibi karin warbixin haddii uusan bukaanku oggolaanshihiisa dhiibin.
Turjubida luqadaha kale
Tolkning till andra språk - somaliska
Haddii aanad ku hadal iswiidhishka waxad xaq u yeelan kartaa turjubaan marka aad la kulmayso dhakhtar ama cid kale dhinaca daryeelka caafimaadka ama daryeelka ilkaha. Xaaladaha badankooda shaqaalaha caafimaadka ayaa ballamin kara turjubaan. Sheeg inaad u baahantahay turjubaan luqada ah marka aad ballansanayso booqashadaada.
U gudbinta isbitaal ama daryeel gaar ah
Remiss - somaliska
Mararka qaarkood waxad u baahan kartaa inaad daryeel ka hesho rug kale oo aan ahayn ta aad tegi jirtay. Markaasi waxad u baahan kartaa u gudbin si aad halkaasi u tagto.